दाताको लगानी सबैभन्दा बढी तीन नम्बर प्रदेशमा, कम एकमा
२०७५ माघ २९ मंगलबार ०७:३४:००
काठमाडौं । दाताहरुले नेपालको विकासका लागि दिने आर्थिक सहायता सबैभन्दा बढी प्रदेश नं. ३ मा खर्चिने गरेको पाइएको छ । दाताको सबैभन्दा कम आर्थिक सहायता भने प्रदेश नं. १ मा रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा दाताहरुले प्रदेश नं. ३ मा ३३ करोड २४ लाख ७७ हजार ७ सय ६८ अमेरिकी डलर (करिब साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ) लगानी गरेका थिए । दाताहरुले विभिन्न विकास आयोजनामा उक्त लगानी गरेका थिए । दाताहरुले प्रदेश नं. ३ मा गरेको लगानी प्रतिजनता ६०.१ अमेरिकी डलर पर्न आउँछ ।
दाताहरुको दोस्रो ठूलो लगानी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको छ । दाताहरुले गत आर्थिक वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ करोड ४४ लाख २५ हजार ६ सय १७ अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ) खर्च गरेका थिए । दाताहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरेको खर्च प्रतिव्यक्ति २५.२ अमेरिकी डलर पर्न आउँछ ।
दाताहरुले तेस्रो ठूलो लगानी प्रदेश नं. ५ मा गरेका छन् । प्रदेश नं.५ मा दाताहरुले गत वर्ष ६ करोड १३ लाख १९ हजार ३ सय ७ अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ) खर्चेका थिए । विभिन्न विकास आयोजनामा खर्च गरिएको उक्त रकम त्यहाँको प्रति जनता १२.५ अमेरिकी डलर पर्न आउँछ ।
दाताहरुको चौथो ठूलो लगानी कर्णाली प्रदेशका आयोजनामा गरेको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा दाताहरुले गत वर्ष ६ करोड १३ लाख ५ हजार ७ सय १७ अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ) लगानी गरेका थिए । उक्त रकम त्यहाँका जनतालाई प्रत्यक्ष बाँडेको भए प्रतिव्यक्ति ५२.५ अमेरिकी डलर पर्ने देखिन्छ ।
दाताहरुले प्रदेश नं. २ मा गत आर्थिक वर्ष ६ करोड ११ लाख १८ हजार ८ सय ७३ अमेरिकी डलर (करिव ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) लगानी गरेका थिए । दाताहरुको यो लगानी प्रतिव्यक्ति ११.३ अमेरिकी डलर पर्न आउँछ । प्रदेश नं.२ पछि दाताहरुको ठूलो लगानी गण्डकी प्रदेशमा रहेको छ । गत वर्ष दाताहरुले गण्डकी प्रदेशमा ६ करोड ६ लाख २० हजार ४ सय ३ अमेरिकी डलर (करिव ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ) लगानी गरेका थिए । उक्त लगानी प्रतिव्यक्ति २५.१ अमेरिकी डलर पर्न आउँछ ।
दाताहरुको सबैभन्दा कम लगानी प्रदेश नं. १ मा रहेको छ । दाताले प्रदेश नं.१ मा ५ करोड ८३ लाख १४ हजार ७ सय २० अमेरिकी डलर (करिव ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ) लगानी गरेको देखिन्छ । दाताको उक्त लगानी प्रतिव्यक्ति १२.९ अमेरिकी डलर पर्ने देखिन्छ ।